यस्तो छ एरोबिक्सको फाइदा, कसरी गर्ने एरोबिक्स एक्सरसाइज थाहा पाइराखौँ – Medianp
यस्तो छ एरोबिक्सको फाइदा, कसरी गर्ने एरोबिक्स एक्सरसाइज थाहा पाइराखौँ
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, कार्तिक २०, २०७५१६:४४0
काठमाडौँ ,२० कात्तिक । अस्वस्थ खानपानको कारण मानव शरिरमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने गर्छ । त्यतिमात्र हैन् मानिसको दैनिकी जीवन शैलीले पनि मानिसहरुमा विभिन्न रोगहरु देखा पर्ने गर्छ । मटोेपनको कारण आफ्ने शरिरलाई फिट राख्नको लागि मानिसहरुले विभिन्न तरिकाको एक्सरसाइज गर्ने गर्छन् । तर पनि आफुले चाहे जस्तो परिणाम नआएपछि धेरै समस्या हुने गर्छ ।
मटोपनलाई कम गर्नको लागि चिकित्सकहरुले पनि बिहान चाँडै उठ्न र योगा गर्न सल्लाह दिएका हुन्छन् । त्यस्तै व्यायम गने पनि धेरै किसिमका तरिकाहरु रहेका छन् । जसमध्ये एक तरिका हो एरोबिक्स । जुन व्यायाम हामीले आफ्नै तरिकाले आफ्नो घर वरपर गर्न सक्छौँ । एरोबिक्स अन्य तरिकाको व्यायाम भन्दा फरक किसिमको रहेको छ । यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुृ पर्दैन् । तर २,४ दिनको एरोबिक्स एक्सरसाइजले भने खासै फाइदा गर्दैन् । एरोबिक्स दैनिक रुपमा गर्नाले सोचेजतिकै फाइदा हुन्छ ।
एरोबिक्स एक्सरसाइज भनेको के हो ?
१.हिड्ने : हिड्नु पनि एरोबिक्स एक्सरसाइज अन्तर्गत नै पर्छ । यो तरिकाको व्यायम धेरै सजिलो भएको कारण बच्चा देखि बुढासम्मले गर्न सक्छन् । यसको लागि न समय तोकीएको हुन्छ न कुनै उपकरणको आवश्यकता पर्छ । नियमित हिड्नाले शरिरमा अक्सिजनको मात्रा प्रदान गर्छ । यसले थेरै समयमा आफुमा भएको सारा दुख कष्ट भुल्नुको साथै शरिरमा सकारात्मक उर्जा प्रदान हुन्छ ।
२.सिँढीहरुको व्यायामः हिड्ने बाहेक सिँढी चढ्ने र ओर्लने गर्नाले पनि शरिरमा धेरै फाइदा हुने गर्छ । यसो गर्नाले शरिरमा एथलेटिहरु उत्पादन हुने भएकाले शरिर मजबुत हुनुको साथै शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्ने गर्छ । यसरी दैनिक रुपमा सिँढी माथि चढ्नु र ओर्लनु गर्नाले शरिरलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ ।
३. साइकल चलाउनेः साइकल चलाउने पनि एक प्रकारको व्यायाम हो । जसले शरिरका हरेक जोर्नीहरुलाई बलियो बनाउँछ । साइकल चलाउने गर्नाले खुट्टाको मांसापेशी बलियो बनाउने गर्नुको साथै शरिरमा एक किसिमको लाचिलोपन मिल्ने गर्छ ।
४.हातको लागि व्यायामः हातको व्यायामले छातीको मांसापेशीलाई बलियो बनाउछ । यसको लागि कुनै प्रकारको उपकारणको आवश्यकता पर्दैन् ।
हातको व्यायाम कसरी गर्ने : हातको व्यायाम गर्दा सैनिकले जस्तै हातलाई दाँया बाँया माथि उठाएर हिँड्नुपर्छ र विस्तारै हिँडाईको गति बढाउनुपर्छ । यस्तो व्यायाम गर्दा घुँडा अलि माथि हुनुपर्छ । जसले गर्दा खुट्टालाई पनि व्यायाम मिल्छ ।
५.पानीमा गरिने व्यायामः पानीमा गर्ने व्यायामले रमाइलो प्रदान गर्नुको साथै शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्ने गर्छ । पान्को व्यायाम एक प्रकारको पौडिनु हो । पौडिनाले खुट्टालाई मजबुत बनाएर राख्ने गर्छ । मानिसको खुट्टामा रगतको कमी भएको छ भने त्यस्तो बेलामा व्यायामा गरेर रगत लिन सकिन्छ ।
६.नाच्नेः नाच्नुले पनि एक प्रकारको व्यायाम हो । जसले गर्दा शरिरमा एक प्रकारको चुस्तापन मिल्नुको साथै खुसी प्रदान गर्दछ । नाच्दै, कुद्दै, घुम्न, झुक्ने गर्नाले शरिरका सम्पूर्ण पार्टहरुलाई मजबूत बनाएर राख्ने गर्छ । नाच्ने व्यक्तिको लागि अन्य किसिमका व्यायाम गर्नु जरुरी पर्दैन् ।
यी हुन् एरोबिक्स गर्ने तरिका : लामो समयसम्म गरिने कार्डियो र मध्यान्तर अभ्यासले एरोबिक् गर्ने फरक दुई तरिका हुन्छ ।
१.लामो समय सम्म गरिने कार्डियो : लामो समयसम्म एउटै रफ्तारमा गर्ने व्यायाम हो । एक घण्टाको लागि एकै रफ्तारमा हिड्ने । यसो गर्दा शरिरमा भएको क्यालोरि घट्नुको साथै तौल पनि घट्छ ।
यसको फाइदा : १. लामो समयसम्म गरिने काडियोको असर शरिरमा थोरै समयमा देखिने गर्छ । शरिरमा क्यालोरिको मात्रा घट्नुको साथै मेटाबोलीको पक्रियामा परिवर्तन हुन्छ ।
२.मध्यान्तर अभ्यास : एरोबिक्स व्यायाम गर्नाले शरिरमा तागत र शक्ति बढ्छ । यो तौल घटाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम हो । व्यायाम गर्न चाहने व्यक्तिले सुरुमा नै यस्तो अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ ।
यसको फाइदाः यसले शरिरमा क्यालोरिको मात्रा कम गर्नुको साथै सहनशिल बनाउँछ । यसको प्रभाव थोरै समयमा देख्न सकिन्छ । यो तौल कम गर्ने एक प्रकारको सरल उपाय हो । यो एक प्रकारको रमाइलो र सरल तरिका भएको कारण एरोबिक्स गर्ने मानिसहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । हरेक उमेर समूहको मानिसले गर्न सक्ने भएकाले एरोबिक्स अभ्यासले मुटुलाइृ समेत मजबुत बनाउने गर्छ ।
ऐश्वर्या रायको यी ५ फिल्मको चर्चा र सुन्दरताको कारण बनिन् लोकप्रिय नायिका ,यस्ता छन् ती फिल्मको तस्विरहरु र भूमिका
के तपाईलाई मेवा खानुको फाइदाबारे थाहा छ ?यो फलले यस्ता ९ वटा प्राणघातक रोगहरुबाट बचाउछ( अवस्य पढ्नुहोस्)